Izany dia mahakasika indrindra ny fisavàna ara-ketra sy ireo famorian-ketra, izay nihato teo aloha, araka ireo fepetra noraisin` ny fanjakana ho fanohanana ireo orinasa manolona ny hamehana ara-pahasalamana. Efa misy fandaminana vaovao ny fomba fanatanterahana ireo asa ireo tamin`ny taona lasa, ka ny tanjona taminn` izany dia ny mba hanamafisana ny fangaharahana sy ny matihanina, hoy ihany ny DGI. Ny fiverenana tsikelikelin` ireo asa mahazatra eo amin` ny fandraharahana momba ny hetra tokoa dia vato fehizoron` ny rafitra ara-ketra mahomby azo itokisana ary marina ; ary manamafy hatrany ny finiavana hametraka ny fitoviana manokana ny hetra, hoy hatrany ny fampitam-baovao. Nomarihany fa izao fiverenana izao dia hatao anisan` ny fanajana tanteraka ireo fepetra takiana manoloana ny hamehana ara-pahasalamana ary ireo mety ho fahasarotana atrehan` ireo sehat`asa tsirairay avy naterak` izany hamehana ara-pahasalamana izay. Marihana fa ny fanohanana nataon` ny fitondram-panjakana ho an` ny sehatra tsy miankina nandritra ny ady tamin` ny COVID-19 dia ny fanalefahana ara-ketra. Hatreto anefa dia mbola baraingo ny fivoahan` I Madagasikara ao anatin` izao krizy ara-pahasalamana izao ary mbola miteraka voka-dratsy goavana amin` ny lafiny fihariana. Maro ireo orinasa tsy tafarina saingy manomboka izao dia hitango hetra amin` izay ny fanjakana.